ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များအား သင်တန်းဖွင့်လှစ်ပို့ချ - YTV
Home » Programs » News » ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များအား သင်တန်းဖွင့်လှစ်ပို့ချ
ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များအား သင်တန်းဖွင့်လှစ်ပို့ချ
News October 15, 2020 12:15 pm
ကချင်ပြည်နယ်၊ဗန်းမော်မြို့မှာ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်မယ့် မဲရုံမှူး၊ဒုတိယမဲရုံမှူးနှင့်မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များအား သင်တန်းဖွင့်လှစ်ပို့ချခြင်းကို အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်ရက်နေ့ မနက် ၉ နာရီအချိန်က အမှတ်(၂)အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းရှိ မြညီလာခန်းမမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်….
ရှေးဦးစွာ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးမြင့်လှိုင် က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသာဗျော ကသင်တန်းဖွင့်လှစ်ရခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းပြောကြားကာ သင်တန်းစတင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဗန်းမော်မြို့နယ်မှာ မဲရုံ(၆၉)ရုံ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီး ကနေ့မှာတော့ မဲရုံ(၂၃)ရုံရဲ့ မဲရုံမှူး ဒုမဲရုံမှူးများကို နည်းဥပဒေများ၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာများကို သိရှိနိုင်ရန် ပို့ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ အတွင်းရေးမှူး ဦးစိုင်းညီညီ ကပြောပါတယ်….
အဆိုပါ သင်တန်းကို အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်မှ ၁၄ ရက်အထိ မဲရုံမှူးနှင့်ဒုမဲရုံမှူး(၁၃၈)ဦးတို့အား အလှည့်ကျ ပို့ချသွားမှာဖြစ်ကာ သင်တန်းမှာ ရွေးကောက်ပွဲနေ့ မဲရုံအတွင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသိမှတ်ဖွယ်ရာများ၊ လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေ နည်းဥပဒေများ၊ မဲရုံမှူး ဒုမဲရုံမှူးနှင့်မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်၊ မဲပေးခြင်း၊ မဲရေတွက်ခြင်း ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲနေ့နှင့်သဏ္ဍန်တူမဲရုံနဲ့ မဲပေးခြင်းလက်တွေ့သင်ခန်းစာများကို သင်ကြားပို့ချသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်…..
Sourse / Photo ; ဗန္းေမာ္ပြင့္သစ္